လူပြောများ နေကြတဲ့ Test kit တွေ အကြောင်း .. (များများရှယ်ထားပေးပါအုံး …) – Let Pan Daily
ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကနေရောက်လာတဲ့ Test kit တွေနဲ့ ရန်ကုန်က ကိုးဗစ်ကုသရေးစန်တာကြီးတွေမှာ မနေ့ကစစစ်နေပါပြီတဲ့။ ကြိုမှန်းထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ Positive case တွေလည်းအများကြီးထွက်လာပါပြီ။
နောက်ပိုင်းမှာ တော့ အဲ့ဒီ Test kit တွေကို ပြည်နယ်၊ တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်အဆင့်အထိဖြန့်ဝေပြီးတော့ စစ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ ခုလတ်တလောမှာတော့ ရန်ကုန်နဲ့တင် အပတ်မလည်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။
သိကြတဲ့အတိုင်း ရန်ကုန်မှာက ပိုးတွေ့လူနာအများဆုံးပဲ။ ပြီးတော့ တစ်ယောက်ပိုးတွေ့ဆိုတာနဲ့ သူနဲ့ထိတွေ့ဆက်စပ်နေတဲ့သူတွေကို ရသလောက် Contact tracing လိုက်ဖမ်းရတယ်။ ဆိုတော့ အဲ့ဒီထိစပ်လူနာတွေရော၊ အနံ့မရ၊ ဖျားနာ၊ ချောင်းဆိုး နဲ့လာပြတဲ့ သံသယလူနာတွေရော အကုန်လုံးကို ပိုးရှိမရှိ စစ်ပေးဖို့က လိုကိုလိုအပ်ပါတယ်။
အခု Test kit တွေမလာခင်တုန်းကတော့ ဓာတ်ခွဲခန်းကြီးတွေမှာ RT PCR စက်ကြီးတွေနဲ့စစ်ကြရတယ်။ သိကြတဲ့အတိုင်း စစ်ပေးရမယ့် ထိတွေ့/သံသယ လူနာတွေကတအားများတော့ အဲ့ဒီ RT PCR တွေနဲ့သာဆို အချိန်တွေအကြာကြီးထပ်စောင့်ကြရမှာပါ။ ဝန်နဲ့အား မမျှပါဘူး။
အခု Test kit တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ အချိန်မြန်မြန်နဲ့ လူနာအရေအတွက်များများ ပိုစစ်ပေးလာနိုင်မယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် မစစ်ဖြစ်ဘဲလွတ်နေတဲ့ Case တွေ အများကြီးမိလာမယ်။ (ခုလတ်တလောကြားရသလောက် လူ ၁၆၀ လောက်စစ်တာ အယောက် ၅၀ Positive ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့)
အဲ့ဒါကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ နေ့စဉ်ထုတ်ပြန်နေတဲ့ ပိုးတွေ့လူနာအရေအတွက်လည်း ပိုလာနိုင်ပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ ပိုပြီး Effective ဖြစ်လာမယ်။ လုပ်ရကိုင်ရတာ ပိုပြီးလက်တွေ့ကျလာမယ်။ ပိုပြီးအကျိုးရှိလာမယ်ပေါ့။
တဘက်ကလည်း ထပ်ထွက်လာမယ့်ပိုးတွေ့လူနာတွေ အတွက် ကုသရေးစန်တာ(ယာယီဆေးရုံ) တွေကို နေ့ချင်းညချင်းကို အများကြီးထပ်ချဲ့နေတာကြားရတယ်။ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ အလှူရှင်တွေ၊ ပရဟိတဗော်လန်တီယာသမားတွေ၊ ပြည်သူတွေ တက်ညီလက်ညီကြိုးစားရုန်းကန်နေတာ အရမ်းအားရစရာကောင်းလှတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်လုပ် အဆိုးမြင်တဲ့သူတွေဆိုတာကတော့ ရှိနေဦးမှာပဲ။
ခုလိုမျိုး Test kit တွေနဲ့အမြန်စစ်ချလိုက်တော့ ဘာတွေကောင်းသွားမလဲဆိုရင် Q စန်တာတွေမှာ ပိုး ရှိ၊ မရှိစစ်ဖို့စောင့်နေရတာ သံသယလူနာ၊ ထိတွေ့လူနာတွေကို မြန်မြန်ရှင်းထုတ်နိုင်လာမယ်။ အားလုံးကို အမြန်စစ်မယ်။ ပိုးတွေ့ရင် ကုသရေးစန်တာပို့၊ ပိုးမတွေ့ရင် အိမ်ပြန် HQ နေ အဲ့ဒီလိုတွေလုပ်လာနိုင်မယ်။ (ဒါကတော့ အကြမ်းဖျဉ်းတွေးကြည့်မိတာပါ။ တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ ဒီ့ထက်ပိုစိတ်ချရမယ့် Guideline တွေ၊ အစီအစဉ်တွေနဲ့ သွားမယ်ထင်ပါတယ်။)
အဲ့ဒီလိုဆိုရင် Q စန်တာတွေမှာ လူတွေနည်းသွားပြီး Workload အရမ်းကျသွားမယ်။ နေရာထိုင်ခင်းတွေ၊ အချိန်အား၊ ငွေအား၊ လူအားတွေ အများကြီးပိုထွက်လာမယ်။ အဲ့ဒါတွေကို ကုသရေးဘက်မှာ အင်တိုက်အားတိုက်သုံးလို့ရလာမယ်။ မလိုအပ်ဘဲအပိုကုန်တာတွေ နည်းသွားမယ်ပေါ့။
အဲ့ဒီတော့ မေးစရာရှိလာတယ်။ အဲ့ဒီ Test kit တွေက ဒီလောက်တောင်သုံးရလွယ်နေတာ စိတ်ချရလို့လားပေါ့။ ပြောရရင် ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ စက်ကြီးတွေနဲ့စစ်တဲ့ RT PCR နည်းကတော့ Gold standard ပါ။ အကောင်းဆုံး၊ စိတ်အချရဆုံးနည်းလမ်းပါ။ လက်တွေ့မှာကျတော့ ရှိသမျှလူနာအားလုံးကို သူနဲ့မစစ်နိုင်လို့ Test kit တွေကိုသုံးလာရတာပါ။
ပြောရရင် Test kit ကတော့ PCR လောက်တော့ မတိကျတာအမှန်ပါပဲ။ Test kit က Sensitivity မှာ 58% to 80% နဲ့ Specificity ကတော့ 100% ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဆိုလိုတာက Test kit နဲ့စစ်လိုက်လို့ Positive လူ ၁၀၀ တွေ့ပြီဆိုရင် အဲ့ဒီ လူ ၁၀၀ လုံးက ကိုဗစ် Positive ဆိုတာကျိန်းသေပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် False negative ဆိုတာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့။ လူ ၁၀၀ စစ်ရင် ၅၈ ယောက်ကနေ အယောက် ၈၀ အထိပဲ အဖြေမှန်ထွက်ပါတယ်တဲ့။ ကျန်နဲ့သူတွေကတော့ လွတ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့။
ဒါ တာဝန်ရှိသူတွေတရားဝင်ပြောထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ကျနော်နားလည် မိသလောက်ပါ။ RT PCR နည်းကတော့ အတိကျဆုံးလို့ဆိုပါတယ်။RT PCR နဲ့ Test kit က ဘာကြောင့်ဒီလိုတွေကွာခြားနေရတာလဲဆိုတော့ Test kit ဆိုတာက Virus ရဲ့ အပေါ်ယံ Antigen ကိုပဲစစ်တာပါ။ RT PCR ကကျတော့ Virus မျိုးရိုးဗီဇ Gene ကိုစစ်တာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် RT PCR အများကြီးပိုပြီးတိကျသလို ပိုပြီးလည်းအကုန်အကျများပါတယ်။
ဟိုးအရင်တုန်းက တိုးတိုးတိတ်တိတ်ကြိတ်စစ်နေကြတဲ့ သွေးဖောက်ပြီးစစ်ရတဲ့ Ab Test kit ဆိုတာတွေက လူနာရဲ့သွေးထဲက Antibody ကိုစစ်တာပါ။ အခု Ag Test kit တွေထက်တောင် ပိုပြီးအမှားများနိုင်ပါသေးတယ်။တချို့ကလည်း ဘူမသိ၊ ကိုးမသိပြောကြပြန်တယ်။ အဲ့ဒါများ စောစောကတည်းက ခုလိုမျိုး Test kit နဲ့စစ်ချလိုက်ပါတော့လားတဲ့။
ဟုတ်ကဲ့။ အခုနောက်ဆုံးဝင်လာတဲ့ Rapid Antigen Test kit (RAT) ဆိုတာ တီထွင်ထုတ်လုပ်ပြီးတာ ဘယ်လောက်မှမကြာသေးပါဘူး။ အခုသွင်းလာတဲ့ Korea က Test kit တွေဆိုရင် WHO က စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့မှာမှ ပထမဦးဆုံး ထောက်ခံချက် Qualified ပေးလိုက်တာပါတဲ့။
A medical worker in protective suit collectsaswab sample fromawoman for nucleic acid testing following two imported coronavirus disease (COVID-19) infections from neighbouring Myanmar, atahotel in the border city of Ruili, Dehong prefecture, Yunnan province, China September 15, 2020. Picture taken September 15, 2020. cnsphoto via REUTERS
နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းတစ်ခုကို တစ်ပတ်ဆယ်ရက်လောက်အတွင်းရအောင်ယူပြီး သုံးလိုက် နိုင်တာ တော်ရုံအစွမ်းနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့၊ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ ကြိုးစားမှုတွေ အများကြီးပါပါတယ်။Test kit အကြောင်းဆက်ပြောရရင်တော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာထုံးစံအတိုင်း အောက်လမ်းတို့၊ မှောင်ခိုတို့၊ လမ်းကြောင်းတို့၊ လိုင်းတို့က နေတဆင့် ပြည်သူလူထုကြားထဲကို Test kit တွေဝင်လာနေပါပြီ။ Online ပေါ်မှာရောင်းနေကြတာတောင်တွေ့ရပါတယ်။
အစိုးရကတရားဝင်သွင်းထားတဲ့ Test kit မှာတောင် သူတို့ညွှန်ကြားတဲ့ Instruction အတိုင်းအတိအကျလုပ်မယ်ဆိုရင်တောင် Error ဆိုတာရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဝယ်တဲ့၊ Quality ဘယ်လိုမှန်းမသိတဲ့ဟာတွေနဲ့ နည်းစနစ်မမှန်ဘဲစစ်ရင်တော့ ပိုလို့တောင်အမှားများပါဥိးမယ်။ ပြီးတော့ Swab လို့ခေါ်တဲ့ နှာခေါင်း၊ အာခေါင်တို့ဖတ်ယူရတဲ့နည်းပါ။ RT PCR မှာလိုပဲ အခု Test Kit ကလည်း Swab ယူပြီးစစ်ရတာပါပဲ။
အဲ့ဒီ Swab က ကျနော်တို့တောင် တစ်ခါမှမယူဖူးပါဘူး။ မယူတတ်ပါဘူး။ ယူတတ်တဲ့ သူတွေ၊ ယူနေကျသူတွေတောင် PPE တွေဝတ်ပြီး စနစ်တကျလုပ်ကြရတာပါ။ အခန့်မသင့်ရင် Swab ယူနေတုန်း လူနာက နှာချေချောင်းဆိုးလိုက်ရင် ဒုက္ခကများပါဦးမယ်။ တတ်ယောင်ကားနဲ့ စစ်တဲ့နည်းစနစ်မမှန်ရင်လည်း အဖြေကမှားပြီး တိုင်တွေ ပတ်ကြပါဦးမယ်။ ပေါက်ကရနည်းနဲ့စစ်ပြီး အဖြေကမပေါ် ၊ ငါကွ နာဂေးတစ်ဆိုပြီး ပေါ့ပေါ့နေပြန်ရင်လည်း ကိုယ်တိုင်ရော၊ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုပါ ပြဿနာတွေပေးကြပါဦးမယ်။
အဲ့ဒီတော့ ပြောချင်တာက သံသယ/ထိတွေ့လူနာတွေကို လုံလောက်အောင်မ စစ်ဆေးပေးနိုင်လို့ အိမ်မှာပဲပြန်နေ၊ အရေးကြီးမှပြန်လာခဲ့ဆိုတာမျိုးတွေ နည်းသွားတော့မှာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့် သံသယရှိရင် Fever Clinic တွေကိုသွားပြကြပါ။ ပြီးတော့ ဈေးကွက်ထဲက Test kit တွေနဲ့တော့ လက်တည်းမစမ်းကြပါနဲ့။အရေးအကြီးဆုံးကတော့… အိမ်ထဲမှာပဲနေကြပါ။
အေႂကြးျမန္ျမန္ ျပန္ရေအာင္ ၾကက္ဥေလး နဲ႔ အေႂကြး ဒီလိုေတာင္းပါ ….
အစ္မႀကီး တစ္ေယာက္ ရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ အရ တင္လိုက္ပါၿပီ …